[Thursday, January 3rd, 13] :: Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf oo la kulantay dhigeeda wadanka Ingiriiska William Hague
London (RH) Wasiirka arrimaha dibedda UK William Hague ayaa maanta oo khamiis ah xafiiskiisa ku qaabilsay ra’iisal wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo booqasho ku joogta dalka Britain.
Kulankan oo ka dhacay xafiiska arrimaha dibedda Britain oo ku yaalla bartamaha London ayaa labada dhinaca la sheegay in ay kaga hadlen xiriirka labada waddan iyo shar la sheegay in uu ka dhacayo bisha May magaalada London.
“Ku soo dhowow Twitter iyo xilka cusub. Waa inoo kulankeenna berri iyo sii wadidda taageerada UK ee Soomaaliya,” ayuu William Hague ku yiri qoraal uu xalay dhigay bogga uu ku leeyahay Twitter.
Shirka lagu wado inuu dhaco bisha May ayaa dhaqaale loogu raadin doonaa dowladda cusub ee Soomaaliya.
Kulanka marka uu soo dhaamaday ayaa si kooban ay labada wasiir ula hadleen saxaafadda iyagoona sheegay in ay kulankooda uu ku soo dhammaaday guul.
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo booqan doono magaalada London.